Famerenana amin'ny fitrandrahana volamena sy volafotsy amin'ny alàlan'ny Ellicott Dredges
Famerenana amin'ny laoniny ny varotra harena ankibon'ny tany (volamena sy volafotsy) miaraka amina elatra Dredges
Septambra 11, 2014
REPOBLIKA DOMINIKANINA - Ara-tantara, ny dingana momba ny fitrandrahana miaraka amin'ny tahan'ny fanarenana ambany dia niafara fanjaitra misy habetsaky ny akora azo averina. Ny fanesorana an'io fitaovana io dia azo tanterahana amin'ny alàlan'ny dredges.
Misy lafin-javatra maro manamarina ny fitrandrahana sy ny fanavaozana ny fanaovana taoty.
Mila vitsy ny loharanon-karena raha ampitahaina amin'ny fitrandrahana mahazatra. Ohatra, ny «dredge» iray - afaka iray monja - dia manaisotra sy mitondra izany any amin'ny orinasa mpanodina, na dia kilometatra lavitra aza. Mampihena ny vidiny mifandraika amin'ny fampitaovana renivohitra, asa, solika ary fikojakojana izany.
Mandroso ny teknolojia havaozina
Ny fanodinam-bolo dia mamela ny famokarana fanampiny tsy mampitombo ny dian-tongotra amin'ny mine ary tsy mila fahazoan-dàlana fanampiny.
Any amin'ny Repoblika Dominikanina, 105km avaratry ny Santo Domingo no misy ny tetikasa. Ny tompon'ny tetikasa dia Panterra Gold / Envirogold any Aostralia. Ny rambony volamena sy volafotsy dia namboarina tamin'ny asa fitrandrahana mahazatra teo anelanelan'ny 1992 sy 1999. Ny fanarenana ny fitrandrahana tany am-boalohany dia ratsy (<30%) ary betsaka ny akora napetraka tao amin'ny tohodrano. Ny tohodrano dia manana tombana 5,137 tapitrisa metric taonina metaly taonina, volamena 3.8 g / t ary volafotsy 38.6 g / t.
Tao amin'ny 2012, Envirogold dia nividy dredge Ellicott 370 fenitra mba hanala ny taovolony amin'ny tohodrano ary hanamboatra azy ireo any amin'ny toeram-pamokarany.
Ny dredge dia nampiasaina mba hitrandrahana fitaovana amin'ny halaliny hatramin'ny 8m ary paompy ho azy ireo raha tsy lavitra eo anelanelan'ny 500m sy 800m sy ny haavon'ny terminal 11m. Ny slurry dia mantsaka amin'ny alàlan'ny fantsom-pandrosoana HDPE 10-inch. Ny dredge dia miteraka sy pump pump slurry miaraka amin'ny 28% density. Ny tailings dia manana gravity spécitive 2.69 sy hakitroky mando 1.71t / m3.
Mba hampitomboana ny fahaiza-manao famokarana sy hanomezana fahafaham-po bebe kokoa amin'ny fandidiana, dia nividy segondra faharoa i Envirogold 370 dredge avy amin'i Ellicott ao 2013.
Ny dredge amin'izao fotoana izao dia manome 24 ora iray isan'andro amin'ny famahanana fambolena, hantsana mifanolo-bodirindrina mba hahatratrarana ny famokarana, miaraka amina mpanamory iray (1) isaky ny dredge ary mpanampy roa (2) isaky ny mihetsika.
Mba hitantanana tsara kokoa ny fitaovana sy ny rano amin'ny asa fampitrandrahana dia nozaraina ho zana-faritra kely antsoina hoe dobo mitazona. Raha vantany vao nohadina ny ampahan'ny tohodrano, dia ampiasaina ny famoahana indray ny rambony vita amin'ny zavamaniry, mba hitazomana ny dian'ilay tohodrano. Ny asan'ny dredge dia mampiasa ny rano efa misy ao amin'ny tohodrano. Averina averina averina any amin'ilay dobo feno drakitra ilay rano nohomboina ka tsy mila rano fanampiny.
Tao anatin'ny telo volana voalohany tao amin'ny 2013, ny dredge voalohany dia naka sy nanompa manodidina ny 80,000 m3 eo amin'ny zavamaniry ho an'ny tahiry fanodinana.
The Ellicott Series 370 standard dredge dia dredge suction cutter diesel Powered amin'ny paompy 12 ″ x10 and sy 440 HP misy heriny tanteraka. Izy io dia dredge tena mahery, azo atokisana ary azo entina ho an'ity karazana fampiharana ity. Ny singa voalohany dia natolotra tamina fanapahana mahazatra, raha toa kosa ny ekipa faharoa dia misy mpanapaka kodiarana.
Tamin'ny alàlan'ny fifanekena fiasa manokana, ireo teknisianina Ellicott Field Service dia nanamboatra ny dredges roa nandritra ny volana 3 tao 2014. Ity serivisy ity dia nahafahan'ny mpanjifany hampiakatra bebe kokoa ny famokarana dredges ary hampiofana ny mpampiasa azy amin'ny fampiharana fanao ankeriny indrindra.
Ny fironana amin'ny tsena sy ny teknolojia dia manintona kokoa ny fanodinana indray ny taolana. Noho ny fahaizany mamoaka fitaovana be dia be ary mitondra azy ireo fa tsy mila kitapo roa, ny dredge no fiasa mety indrindra ho an'ireo tetikasa ireo. Miaraka amin'ny traikefa 125 taona mahery amin'ny famolavolana sy famokarana kalitao avo lenta, dredge matanjaka sy azo antoka, Ellicott Dredges no vahaolana mety!